ဖြိုဖျက်ခံခဲ့ရသော ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် နေအိမ်ကို ပြတိုက်အဖြစ် NAC တွင် ထားရှိနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ေ?? - Yangon Media Group
ပိုင်ရှင် ပြောင်းသွားပြီဖြစ်၍ ဖြိုဖျက်ခံခဲ့ရ သော ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်နေ အိမ်ကိုပြတိုက်အဖြစ် NLD AIDS CENTER (NAC) တွင် ထားရှိ နိုင်ရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ဖြူဖြူ သင်းထံမှ သိရသည်။ နေအိမ်အဖျက်ခံရပြီးနောက် အားလုံးလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ် နေသည့်အတွက် ယခု NAC ဝင်း နေရာတွင် ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားခြင်းဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပြတိုက်ဖြစ်မြောက်ရေး၊ ပြတိုက် စောင့်ရှောက်ရေးများကို အားလုံး နှင့်တိုင်ပင်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဟုဆိုသည်။
”အားလုံးလည်းသိတဲ့အ တိုင်းပဲလေ။ ချက်ချင်းကြီးဖျက် ပစ်တာတွေဆိုတော့ အားလုံးက တော်တော်လေး စိတ်မကောင်း ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုး။ ဒါလေးကိုမြန်မြန် လေးဖြစ်သွားအောင်လုပ်လိုက် တဲ့သဘော။ နောက်ပြီးတော့မှ စီစဉ်တာတွေ စောင့်ရှောက်တာ တွေ၊ ရေရှည်သွားဖို့တွေ ဒါတွေက ဆက်ပြီးတော့ လုပ်ရမှာတွေ အ များကြီးရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့ NAC စင်တာထဲမှာပဲ လုပ်ဖို့အတွက် လျာထားတာပေါ့နော်။ ဒီရက်ပိုင်း တော့ လုပ်ဖို့ရှိတယ်။ပြင်နေပါ တယ်။ လုပ်တော့မလုပ်ရသေးပါ ဘူး။ အခုဟာကအစပဲရှိသေး တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ဘယ်လိုစီစဉ်ကြမလဲဆိုတာတွေ နောက်ပိုင်းကျရင် ဆက်လုပ်မှာပါ ရှင့်။ လုပ်တာကတော့ ဒီရက်ပိုင်း လုပ်ဖို့များတယ်။ နောက်ပိုင်းလုပ် ငန်းစဉ်တွေကတော့ အများကြီး သွားရဦးမှာပေါ့နော်။ ဘယ်လို ကော်မတီတွေဖွဲ့ကြမလဲ။ ဘာ တွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတွေဆက် လုပ်ဖို့ရှိပါသေးတယ်”ဟု ဒေါ်ဖြူ ဖြူသင်းက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်တွင် ပြော သည်။
ယင်းကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ရာ တွင် ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်ဖောင် ဒေးရှင်းနှင့်လည်း ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်သွားဖို့ရှိကြောင်း သိရသည်။ ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင်ဖောင် ဒေးရှင်းအနေဖြင့်လည်း ဆရာ ကြီး၏ နေအိမ်မဖြိုဖျက်ခင်က တည်းက မူလနေအိမ်ကို ပုံစံမ ပျက်ပြောင်းရွှေ့ပြီး ပြတိုက်ဖွင့် လှစ်နိုင်ရန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသ ကြီးအစိုးရအဖွဲ့ထံ မြေနေရာ တောင်းခဲ့ဖူးကြောင်းနှင့် ဟံသာ ဝတီဦးဝင်းတင်နှင့်ပတ်သက် သည့် ဆောင်ရွက်ချက်များတွင် လည်း ဖောင်ဒေးရှင်းအနေဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုကြောင်း သိရသည်။
” NAC ဝင်းထဲမှာ ပြတိုက် အတွက် နေရာရတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မသိရပါဘူး။နောက်မှ စာတွေဖတ်ပြီး သိရတာပါ။ ပြတိုက်ဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် ဘယ်သူတွေပဲလုပ်လုပ် ကျွန်တော်တို့ဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့ကတော့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ ရှိပါ တယ်”ဟု ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖောင်ဒေးရှင်း၏အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်အောင်က ပြောသည်။ ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်သည် သတင်းစာဆရာကြီးအဖြစ် ပြည် သူများဘက်မှ ရပ်တည်၍လည်း ကောင်း၊ ဒီမိုကရေစီစနစ်ပေါ်ထွန်း လာရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့သူအဖြစ်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်း သားများကို ထောက်ပံ့နေသူအဖြစ် လည်းကောင်း၊ သတင်းစာဆရာ တစ်ဦးအဖြစ်လည်းကောင်း ထင်ရှား ကျော်ကြားခဲ့ပြီး ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် ဆရာကြီးအား ဂုဏ်ပြုသောအား ဖြင့် ဦးဝင်းတင်လမ်းအဖြစ် သတ် မှတ်ထားရှိထားကြောင်း သိရသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ဒုတိယအပတ်အတွင်း မော်လမြိုင် သံလွင်ဈေးမှ ငါးဒိုင်များ ဈေးရုံသစ်သို့ ပြောင်းေ
နျူကလီးယား လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေး စာချုပ်မှ အမေရိကန် နုတ်ထွက်ပြီးနောက် ရုရှားကလည်း အားကျမခံ ??
Facebook တွင် အခြားမိန်းကလေးနှင့် စကားပြောခြင်းကြောင့် လင်မယား စကားများရာမှ ဇနီးသည်က ခင်ပွန်းဖြ